ဗီဒီယို RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
Sapanca Teleferik Projesine Direnen Halka Tehdit ‘Kafanıza Sıkarız’; Sapanca’nın Kırkpınar Mahallesi’nde teleferik projesinde ağaç kesimlerine karşı direnen halka güvenlik görevlileri “kafanıza sıkarız” tehdidinde bulundu. Sapanca‘nın Kırkpınar Mahallesi yakınında yapılması istenen [ပို ... ]
13.500 m ၏စုစုပေါင်းအရှည်ရှိပြီး 27000 m ပါ ၀ င်သည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်နှစ်ကြောင်းမျဉ်းပါ ၀ င်သည်။ •လည်ချောင်းလမ်းကြောင်းကိုနှစ်မြှုပ်ထားသောဥမင်နှင့် 1 နှစ်မြှုပ်ထားသောဥမင်နှင့်ပြုလုပ်ထားသည် [ပို ... ]
Yamanevler မက်ထရိုဘူတာတွင်မှတ်ပုံမတင်ထားသောလက်နက်လုံခြုံရေးအတားအဆီး၊ ရထားလမ်းကိုလိုင်စင်မဲ့သေနတ်များနှင့်ကျည်ဆံများဖြင့်စီးလိုသူနှစ် ဦး ကို Yamanevler ဘူတာမှလုံခြုံရေးအစောင့်များကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ခရီးသည်များသည်ရဲမှ X-Ray စက်ထဲသို့ချိတ်ဆွဲထားသည် [ပို ... ]
Gaziray İstasyonunda Çökme Meydana Geldi! : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, TCDD’nin desteğiyle yaptığı Gaziray Banliyo Projesi’nin Başpınar yolu üzerindeki istasyonunda zemin çökmesi meydana geldi. Bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alan Şahinbey [ပို ... ]